EGibhithe lasendulo, iziboshwa zazibizwa nge- “skr-cnh” okusho ukuthi “abathunjiwe”
En IGibhithe lasendulo, iziboshwa zazibizwa nge- “skr-cnh” okusho ukuthi “abathunjwa”. Kwakunjalo kuwo wonke ama-like, isiboshwa sasiyisithunjwa esasinamalungelo futhi sasithokozela inkululeko ethile, sasingesona isigqila, into, noma okuthile okungashaywa ngazo zonke izinhlobo wokuhlukunyezwa. Igama elithi isigqila ngakho-ke alinasuka e-Afrika, kodwa eYurophu, lapho ukuhlonipha umuntu kude nokuvumelana nokuqanjwa okungokomoya kwabantu base-Afrika.
Ngaphezu kwalokho, ngokusho kukatilosi wase-Italiya uCa Da Mosto, bathumba izigqila, babhabhadisa, babafundisa isiPhuthukezi, babanika amagama aseYurophu, base bebuyela e-Afrika ukuyothatha ezinye izigqila; engeza kulokhu iqembu elinamandla lezigebengu, ukubulala, ama-brigands amaPutukezi futhi eyodwa yathola uhlelo lokuhlaselwa okwathatha iminyaka engaphezu kuka-400.
Masizibekele imizuzwana embalwa emqondweni wamaqiniso; ungumAfrika emasimini akho ehlome ngomnsalo, umkhonto nesihlangu futhi uza ekhaya lakho amadoda amhlophe anobutha ahlome ngezibhamu, imicanoni, anenhloso eyodwa kuphela, ukuthwebula inani eliphezulu mnyama (igolide elimnyama lesikhathi) ngazo zonke izindlela ezingakhona. Siyakhumbula ukuthi isisekelo sokuhweba ukushintshana kwezimpahla noma izinqubo. Kuphi ukuhweba lapha? Masibe nobulungiswa futhi sihlakaniphe ekuboniseni kwethu, lezi zikhulu azange zikhethe ukuzithengisa, kepha zaphoqeleka ukuba, uma kungenjalo kungani zingakwenzi ngaphambi kokuhlasela kwezwe labo ngabelungu.
Eminye imininingwane ekhishwe encwadini kaMnu Bwemba-Bong “Lapho um-Afrika eseGolide Elimnyama lase-Europe, izinhlelo ze-MENAIBUC”.
Inkosi u-Alfonso I (NzingaMbemba) inkosi yaseKongo: "nsuku zonke, abathengisi baphuca abantu bethu izikhonzi, izingane zaleli lizwe, izingane zezikhulu zethu kanye nabaholi, abantu bezihlobo zethu (…) ukugwema lokhu kuhlukumezeka Ngabe kudingeka ukuthi kulo mbuso abapristi nabantu abambalwa bafundise ezikoleni (…) kuyintando yethu ukuthi lo mbuso akuyona indawo yokuhweba ngezigqila noma yokudlula kwezigqila ”
INkosi Tezifon yase-Allada "uzokwakha indlu lapho uzobeka khona izingcezu ezimbili ezincane zamakhanoni, ngonyaka olandelayo uzobeka ezine, futhi ngesikhashana nje imboni yakho izoguqula ibe yibhande elizokwenza ukukwenza inkosi yamazwe ami futhi kukwenze ukwazi ukubeka imithetho kimi ”.
U-Almany, inkosi yama-Moslems nabo bonke ababalulekile ezweni lakhe… siyakuxwayisa ukuthi bonke abazofika kithi bezokwenza ukuhweba bazobulawa futhi babulawe uma ungazibuyiseli izingane zethu kithi ... asifuni nakancane ukuthi uthenge amaSulumane futhi kusuka kude nakude ”
Abantu base-Afrika bebelokhu bemelana nokuhweba ngezigqila. Ukulwa kwabo nabathengisi bezigqila kuholele ekubhujisweni kwayo yonke imibuso yase-Afrika, okwakungehlula ukumelana nabanqobi abahlome kangcono. Kwalandelwa ukusungulwa kwenhloko yemibuso, ngamakhoboka, ngamakhosi ase-Afrika ayizidlakudla noma abelungu ababizwa ngamagama ase-Afrika okuzonakwa esikhathini sethu njengabantu base-Afrika abathengisa abanye abantu ngokweneliseka.
“Kuyambula ukubona ukuthi umbuzo wokukhashelwa kwezwe, othinta bonke abantu, uba yinkinga futhi ube necala kubantu base-Afrika benkathi yezigqila. Lokhu kufihla okuthile. AbaseYurophu babambe kakhulu futhi bathengisela amakhulu eminyaka amaqabane abo kuma-Arabhu ukuzuza ngokuhweba ngezigqila ngaleso sikhathi. AmaFulentshi athengiswa kakhulu kumaJalimani phakathi neMpi Yezwe Yesibili. Baze bathengisa amaJuda ngamakhulu ngezinhlanganisela zezikhulu eziphezulu zoMbuso… ecaleni laseFrance, umuntu ubeka uJean Moulin ongazweli kanti ezimweni zase-Afrika, umuntu uba yi-amnesiac. Amanye amaNdiya asebenza njengama-scouts emabuthweni aseMelika ngesikhathi kunqotshwa entshonalanga, amaShayina anamathela kuhulumeni ngesikhathi sobukoloni ayengama-pro-Anglo-Saxon, kepha siza ukumangalela ama-Afrika kuphela athi bathengisa abafowabo. Umqondo wabafowethu kuphela waba nomqondo wangempela ngemuva kokukhiqizwa ikoloni, okuchoboza bonke abantu base-Afrika ekubumbeni okufanayo. Ngaphambi kokuthi kube ngumbuzo wabantu abahlangene noma cha ngemibumbano, ngaphansi noma cha. Izazi-mlando zaseNtshonalanga zisondela emlandweni wangaphambi kobukoloni ngokumemezela ngazo zonke izindlela ukuthi amakhosi ase-Afrika, enza izimpi zangaphakathi ezingagunyaziwe, aqeda ngesitoko esikhulu sezinceku okwakudingeka asithengise ngazo zonke izindleko. Kuwukungabi namandla okusebenza nokungathembeki kwengqondo ”.
Ngu-kamit uSerge Bonza
Lapho um-Afrika wayeyigolide elimnyama lase-Europe
kusukela ngo-Agasti 3, 2020 4:09
Usuku lokukhulula 2013-03-25T00:00:01Z
Edition Uhlelo lwesi-3
Inombolo yamakhasi isihlangane 414
Usuku lokushicilela 2013-03-25T00:00:01Z
Usuke usabela"EGibhithe lasendulo, iziboshwa zaqanjwa ngegama lokuthi ..." Imizuzwana embalwa edlule
Ukuncipha kobugqila: ongakaze utshelwe ngakho
Ubani u-Abraham Petrovich Hanibal?
Umlingo weCosmos - Imibhalo (2012)
izimfihlo ze-esoteric ze-geometry ezingcwele - Imibhalo (2010)
Kwakungubani uFrancisco Del Rosario Sanchez, uyise wenkululeko weSanto Domingo?
Ezinsukwini eziyi-27 ezedlule
Abantu base-Afrika bebelokhu bemelana nokuhweba ngezigqila. Ukulwa kwabo nabathengisi bezigqila kwaholela ekubhujisweni kwayo yonke imibuso yase-Afrika